Shira Xaxuun Dhugaa dhokasuuf Yaaluun Dhugaa Dhabamsiisu Hin Danda’u! – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooShira Xaxuun Dhugaa dhokasuuf Yaaluun Dhugaa Dhabamsiisu Hin Danda’u!
Shira Xaxuun Dhugaa dhokasuuf Yaaluun Dhugaa Dhabamsiisu Hin Danda’u!
Damee Boruu: Amajjii 31, 2020
Dhugaa owwaaluu halkanii fi guyyaa shira xaxuuf yoo dhama’an iyyuu akka bakkalcha barii bola boldogi jedhee baha. Mootummaan Kononeel Abiyi WBO torbaan lama keessatti lafa irraa hareen balleessa jedhee dhaate ka’e wagga tokko il Komandi postii irra dhaabee achii tochoosuu hin dandeenye. Humna RIB Wallagaa fi Gujii itti gadi guru malee kan ol deebi’u hin jiru. Humna waraanan milka’uu dadhabuu isaa yaroo hubatu shira diraamaa qopheesse gargaarsa Uummata Amhaaraa ifatti hawwachaa fi kadhachaa akka jiru ifatti argaa jirra.
Shamaran Bartoota Amaaraa Universittii Dembi Doolloo keessa badan kan jedhuu Diraamaa Mootummaan Kononeel Abiyi qopheess dha. Garuu qaama Mootummaa warri tahan hunduu seenaa shira kana guutuutti waan hin beeknee guyyaa guyyaan sobaa jiru. Maqaan ijoollee durbaa badanii, lakkobsi isaanii meeqa akka tahan, ijoollee dhiiraa jiraachuu fi hin jiraanee, yoo ukkamamanii jiraatan eenyyu akka isaan ukkamsee waan beekamu hin jiru.
Kun hunduu isaa dhufe isa jedhuuf, baratoonni Oromoo Universitota Amhaaraa keessatti hedduun waan ajjeessamaniif karaa tokkoon akkasuma baratoonni Amaarsaas biyya Oromoo keessatti badaa jiru jechuuf. Inni lammaffaa garuu gargaarsa Uummata Amaahara hawwachuuf. Uummatni Amaahra utuu Mootummaan Abiyi akka kijibaa jiru arguu yoo Uummata Oromoo kan komatu tahe baayyee rakkina qaba. Akkuma warri hubachuu danda’an jiran warri afaanfajja’anii Uummata Oromoo keessatuu Uummata Oromoo Wallaga dhihaa abaaraa jiran ni aggarra. Hojiin Mootummaa Abiyi uummata wal itti dhiree wal ficisiisuuf deemaa akka jiru namni hin hubannee yoo jiraa nama garaara isaa malee waan biraa hin aggarre tahuu qaba.
Uuummatni Oromoo bal’aan kan hubachuu qabu Mootummaan Abiyi meeshaa wal quunnamtii kutee humna Liyyuu Polisii Amaaraa itti uffatee RIB uwiisee Uummata Oromoo nagaa hidhanna hin qabne lafa irraa dugugsiisaa akka jiru dha. Liyuu Polisiin Amaaharaa shamaran Amaaraa ukkamaman barbaachaaf Oromoo argu hundaa jumaalan ajjeessuudhaan ijaa bahaa jira. Haala kana Uummatni Oromoo bal’aan taa’ee ilaaluun waan nama qaanessu.Kan har’a Wallaga, Gujii, Boranaa fi Lixa jidduu Galeessa Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru boru kan Oromoo hundaa akka tahe ifatti arguu qabna.
Ammaan kana soba isaanii kana duraa waan Uummatni Amaaharaa illee irratti hubataa dhufee jechaa shira kana sadarkaa ol aanatti guddisaa jiru. Humni Amaaharticha Damaqee Mokonnon jedhamuun hooganame tokko akka ijoolleen durbaa bade jedhamitu karaa argamtu barbaaduuf of ijaaree jira. Dhugaan jiru garuu amma isaaniif danda’ame Uummata Oromoo fixxuuf akka tooftaa baafachaa jiran agarsiisa. Yoo hojii siyaasaa ittiin raawwachuuf durba kana ofii dhoksanii of harkaa yoo qabatan malee durbi bade hin jirtu. Yaroo barbaadan immoo ijoollen bade kun maatii ishee wajjin wal quunnamtii qabdi jedhu. Haalli kun faalla ukkamamuu akka tahe ifa jira. Soba Mootummaan Kononeel Abiyi afuufu qofa mirkaneessa.
Kanaafuu bakka jirru maraa kaanee Mootummaa kashilabee dhiqaaloota Habashaan gurmooftee sirna Nafxanyaa uummata keenya irratti deebisuuf wixxifatu kana irree tokkoon of irraa darbuu qabna. Dhaabolleen Oromoo kan ABO, KFO fi PBO waa’ee filmaataa oddeessuu dhiisanii waa’ee Uummata Oromoo dhumaa jiruu fi komandi postiin Uummata Oromoo irra qubate akka ka’uu qabsoo gochuu qabu. Utuu Uummatni Oromoo ajjeefamaa, hidhamaa fi sayniin isaa lafa irraa dugugamaa, qabeenyi isaa barbadaa’aa jiru waa’ee filmaataa yaaduun abjuu dha. Oromiyaa keessa nageenyi hin jiru. Bakka nageenyi hin jiretti filmaanni dhugaa jiraachuu hin danda’u. Nageenyi kan jiru biyya Tigrayi qofa fakkaata. Biyya Tigraay deemanii filamuuf laata? Eeyyee Raayyaa keessatti dorgumuu danda’u taha.
Waa’ee abjuu filmaatan uummata dogongorsuu dhiisaatii WBOn akka jabaatu gargaaraa. Uummatni Oromoo harka wal qabatee akka injifanno isa dhumaaf qophaa’uu uummata damaqsuu, ijaaruu fi hidhachisuu malee Mootummaa Kononel Abiyiif meeshaa taatanii waa’ee filannoo oddeessaa ooluun uummatni akka of dhagatu gochuu waan taheef haala kana keessaa bahu qabdu.
Gadaan Gadaa Bilisumma Ti!
Kabaja Guyyaa WBO, Gurraandhala 02, 2020 – Washington, DC
በረከት ሶሎሞን አብርሃም says:
የስለላ ዶክተር አብይ አህመድ ዘብሄረ ጉራጌ ጠንቀ ኦሮሞ ስዩመ ብልፅግና በመደመር ጨፍላቂ ኢትዮጵያ የዘመኑ ጠላታችን መሆኑን ማወቅ አለብን።ይህ የተንኮል እና የሴራ መሃንዲስ አዲሱን የጉራጌ ስርወ መንግስት ስር እንዲሰድለት የኦሮሚያዊያትን እና የኦሮሚያዊያንን ንፁህ ደም በከንቱ እያፈሰሰ ስለሚገኝ እያንዳንዳችን ሃላፊነታችንን መወጣት አለብን።